बलात्कार बहस : ‘म’ सावधान हुने कि समाज सुधार्ने ?
तपाईले काठमाडौंको चक्रपथ देख्नुभएको छ ? प्रत्यक्ष नदेखेको भएपनि सामान्य जानकारी चाहिँ छ नै होला । चक्रपथमा पैदल यात्रुलाई सडक वारपार गर्न ‘जेब्रा क्रसिङ’ बनाइएका छन् । पैदल हिँडडुल गर्नेको सहजताका लागि मुख्य राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा पनि ‘जेब्रा क्रसिङ’ बनाइएका हुन्छन् ।
‘रेड लाइट सिग्नल’ उपलब्ध क्षेत्रबाहेक ‘जेब्रा क्रसिङ’बाट पैदल यात्रुले हिँड्दा सवारीसाधनले गाडी रोक्नुपर्ने, पैदल यात्रुलाई पहिला बाटो काट्न दिनुपर्ने मान्यता हुन्छ । यो सैद्धान्तिक पक्ष हो । व्यावहारिक रुपमा पनि अधिकांश सवारीसाधन चालकले पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न दिएर मात्रै सवारीसाधन अगाडि बढाउँछन् ।
तर, सबै चालकले सैद्धान्तिक कुरालाई व्यवहारमा उतार्दैनन् । त्यही भएर पैदल यात्रुले ‘जेब्रा क्रसिङ’बाट बाटो काट्दा पनि दायाँबायाँ हेर्नुपर्छ । ‘जेब्रा क्रसिङ’ पैदल यात्रुको प्राथमिकतामा पर्छ भनेर तपाई दायाँबायाँ नहेरी अगाडि बढ्नुभयो भने दुर्घटनामा परेर तपाईको ज्यान जान सक्छ । परबाट हुइँकिएर कुनै सवारीसाधन आइरहेको छ भने ‘जेब्रा क्रसिङ’मा तपाईको प्राथमिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि तपाईले पाइला रोक्नुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा सवारीसाधन चालकले रोक्नुपर्ने भएपनि तपाईले आत्मरक्षाका लागि पाइला रोक्नैपर्छ । यहाँ सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक पाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, नदिए तपाईको ज्यान जान सक्छ ।
समाजमा चोरी लुटपाटका घटना हुनु हुँदैन । तपाईको घर पसलभित्र भएको सरसामानलाई चोरले चोर्नु अपराध हो । सरकारले चोरी र लुटपाट हुन नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्न कानूनी व्यवस्था छ र कारवाही भएका उदाहरण पनि छन् । यो सैद्धान्तिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि तपाईले आफ्नो घर पसलमा ताल्चा लगाएर बन्द गर्ने गर्नुभएको छ । किनकि, व्यावहारिक रुपमा तपाईले पनि आफ्नो धनसम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने त तपाईले ताल्ला नलगाएपनि होला नि ! सैद्धान्तिक पाटो मात्रै हेर्ने हो भने पहिला त मान्छेले नै चोरी गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो अपराध हो । दोस्रो देशमा सरकार छ, चोरी हुन नदिन सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ । अनि किन लगाउने त ताल्चा ? होइन, ताल्चा त लाउनैपर्छ भन्ने तपाईको राय हुनुपर्छ ।
तपाई शारीरिक रुपमा बलवान पुरुष हुँदाहुँदै पनि लाखौं रुपैयाँ झोलामा बोकेर जंगलको एकान्त बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ ? अवश्य सक्नुहुन्न । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा तपाईले निर्धक्क रुपमा सुरक्षित महसुस गर्दै जतासुकै हिँड्न सक्ने गरी राज्यले वातावरण बनाउनुपर्ने होइन र ?
तपाईलाई सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाएको छैन भन्ने लागेर नै तपाई एक्लै त्यसरी लाखौं रकम बोकेर हिँड्नुहुन्न । शुरूमा त बैंकिङ प्रणालीबाट रकम पठाउनुहुन्छ । तर, रकम बोकेरै जानुपर्ने अवस्था भए समूहमा आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाएर हिँड्नुहुन्छ । व्यावहारिक रुपमा आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थापन नमिलाए तपाई लुटिन सक्नुहुन्न, लुटेरासँगको झडपमा तपाईको ज्यान समेत जान सक्छ ।
आमाबुवाले घरमा छोरीहरूलाई ‘छोरी मान्छे एक्लै हिँड्नुहुन्न, रातबिरातसम्म बाहिरै बिताउनुहुन्न’ भन्छन् । पछिल्लो समयका केही छोरीहरूले आमाबुवाको यो भनाइलाई ‘पितृसत्तात्मक सोच’ भनेर टार्ने र विरोधमै उत्रिने प्रवृत्ति देखिन्छ । छोराहरूले हिँड्न हुने अनि छोरीहरूले हिँड्न किन नहुने ? घर भित्रैबाट छोरीमाथि भेदभाव र पक्षपात हुने गरेको सन्दर्भलाई बलियो देखाउन यस्ता उदाहरण दिने गरिएका छन् ।
के आमाबुवाले छोरीहरूलाई भेदभाव गरेरै एक्लै र रातबिरात नहिँड्न सुझाव दिएका हुन् त ? छोरी मान्छे अगाडि बढ्न नसकुन् भन्ने आमाबुवाको आशय होला त ? पटक्कै होइन । आमाबुवाको सुझावमा ‘पितृसत्तात्मक सोच’ नभई आत्मरक्षा गर्न छोरीलाई दिइएको सुझाव झल्किन्छ अर्थात् ‘मातृरक्षात्मक सोच’ । अभिभावकको सद्भावलाई भेदभावका रुपमा बुझ्दा आत्मरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीको पाटोमा ध्यान दिनै छाडिएको छ ।
बलात्कारका घटना हुनुमा ३ वटा पक्ष दोषी देखिन्छन् । पहिलो – राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, दोस्रो – पीडक व्यक्तिमा बलात्कारी मानसिकता हावी हुनु र तेस्रो पीडित व्यक्तिले आत्मरक्षाका लागि पूर्वसावधानी नअपनाउनु । व्यक्तिगत सुरक्षामा सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ता सम्बन्धित व्यक्तिकै हुनुपर्छ ।
राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पूर्णतः भर पर्न सकिन्न, त्यसैले आफ्नो तर्फबाट पनि पाइला–पाइलामा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बलात्कारी मानसिकता अपराध हो र यस्तो मानसिकता राख्नु हुँदैन भन्ने प्रभावित पक्षको दृष्टिकोण ठीक भएपनि त्यो मानसिकतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार र सुविधा पीडित पक्षमा हुँदैन । अपराधीको मानसिकतालाई प्रभावित पक्षले रोक्ने सुविधा हुँदैन ।
सम्भावित खतराबाट जोगिन प्रभावित वा पीडित हुन सक्ने व्यक्तिले पूर्ण सावधानी अपनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ । आफूले पूर्वसावधानीका उपाय अपनाउन सकियो भने बलात्कार लगायत जुनसुकै दुर्घटनाबाट पनि बच्न सकिन्छ । पूर्वसावधानी अपनाइएन भने महिला मात्रै होइन, पुरुषहरूले पनि लुटपाट र कुटपिटको शिकार हुनुपर्ने हुन्छ । पूर्वसावधानीले पूर्णतः अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेपनि अपराधको मात्रा घटाउन अवश्य नै मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
बलात्कारका सन्दर्भमा बहस गर्दा समाज सुधार्नुपर्ने तर्क र बलात्कारी मानसिकतालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति खुबै देखिन्छ । तर, आत्मरक्षाका लागि सावधानीका उपाय अपनाउनेतिर खासै बहस भएको सुनिँदैन । मलाई सुरक्षित राख्न अरु कसैले वातावरण बनाइदिनुपर्नेभन्दा पहिला ‘म’ आफूले अपनाउनुपर्ने सावधानीतिर पनि सोच्ने कि ? मैले सावधानी अपनाएपछि समाजका अरु तत्वको पनि भूमिका त रहन्छ । तर, म सावधान हुने विषय प्रमुख हो । खतरा ‘म’ माथि जुनसुकै बेला पनि छ भने मैले सावधानी अपनाउनुपर्छ, पाइपा–पाइलामा ख्याल गर्नुपर्छ । यो विषयलाई त्रासको रुपमा होइन, सावधानी र सुरक्षाको रुपमा ग्रहण गरिनुपर्छ ।
व्यावहारिक भएर सोच्ने कि ?
बलात्कार हुन नदिन राज्य र सरकारको भूमिका पनि हुनुपर्छ र समाजको पनि । यो महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पाटो हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रुपमा हेर्दा हरेक ‘म’ व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्ने पक्षले नकार्नु हुँदैन । राज्य र समाजले सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि नबनाइदिएको अवस्थामा जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्ने त ?
दुर्घटना, चोरी र लुटपाटका प्रसङ्गमा उल्लेख गरिएझैं सबैले व्यक्तिगत सुरक्षाका उपाय पनि अपनाउनुपर्छ । सैद्धान्तिक पाटोलाई देखाउँदै सरकार, समाज र पुरुषलाई गाली गर्नुले क्षणिक आत्मसन्तुष्टि त होला, तर समस्याको समाधानतिर लैजाँदैन । बलात्कार न्यूनिकरण गर्ने विषय आत्मसन्तुष्टिभन्दा पनि समाधान केन्द्रीत हुनुपर्छ । व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिने विषयलाई भेदभाव र अवहेलनाको रुपमा होइन कि व्यक्तिगत कर्तव्यको रुपमा हेर्नुपर्छ ।
एउटा सत्य के हो भने बलात्कारलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरिको उदाहरण हेर्दा हुन्छ । बलात्कारी मानसिकताले मौका पाउने बित्तिकै झम्टिहाल्छ । बलात्कारी मानसिकता अर्काेको मनको कुरा हो, त्यसलाई हामी पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । तर, बलात्कारी मानसिकतालाई मौका नदिने अवस्था हामीले अधिकतम सिर्जना गर्न सक्छौं । मौका नमिले बलात्कारी मानसिकता आफैं बिलाएर जान्छ ।
लैङ्गिक समानताको कुरा गर्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले महिला र पुरुषले समान सुरक्षा व्यवस्था अपनाउँदा हुन्छ भन्ने हुँदैन । महिलालाई विशेष सुरक्षा र सावधानी आवश्यक हुन्छ । किनकि महिला र पुरुष फरक–फरक व्यक्ति हुन्, फरक–फरक शारीरिक बनावट छ । शारीरिक बनावटमै विभेद र विशेष भएको अवस्थामा समान सुरक्षा व्यवस्थाले कसरी पुग्ला ? समान उमेर र तौल समूहका महिला र पुरुषको तागत मापन गर्ने हो भने पनि प्रायः समान भेटिँदैन ।
खजाना र लाखौं रुपैयाँ बोकेर हिँडिरहेको पुरुषलाई विशेष सुरक्षा चाहिन्छ । सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने भूमिकामा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सुरक्षा चाहिन्छ । त्यसैगरी समाजमा महिलालाई पनि पुरुषको तुलनामा विशेष सुरक्षा चाहिन्छ । मानौ कि महिला समाजका ‘खजाना’ जस्तै हुन्, जसलाई डाकुहरूबाट खतरा भइरहन्छ । तसर्थ, आत्मरक्षाका लागि सरकार र समाज जत्तिकै आफूले पनि सचेत र सावधान हुनुपर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
महिलाले घरबाहिर निस्कँदा दाजुभाइलाई अंगरक्षक (बडिगार्ड) बनाएर लैजाने सामाजिक संस्कृतिमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लुकेको हुन्छ । जुन अभ्यासलाई हामी भेदभाव र हिनताका रुपमा प्रचार गर्दै गइरहेका छौं र त्यसलाई त्याग्दै गइरहेका छौं । तर, समाजमा स्थापित संस्कृतिहरू सुविचारित रुपमा अभ्यासमा आएका हुन्छन् भन्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनै छाडेका छौं । अपराध न्यूनिकरणका लागि राज्य, समाज र अरु व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने सँगसँगै आफू पनि जिम्मेवार बनौं । बालबालिकाको सुरक्षामा अभिभावक सचेत बनौं ।
खुर्सानीको धुलो बोक्न सल्लाह !
महिला हिंसा, दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना नयाँ होइनन् र यस विषयमा हुने बहस पनि पूरानै हुन् । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रीमण्डलमा योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री थिए । उनी महिला सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा अतिथि भएर गएछन् ।
महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री उपाध्यायले सुझाव दिए – महिलाले खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्नुहोला, कसैले केही दायाँबायाँ गर्न थाले आँखामा धुलो हालिदिनुहोला । महिलाले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि केही उपाय अपनाउनुपर्ने उनको आशय थियो ।
तर, कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारकर्मीले त्यसको विरोध गरे । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बेला खुर्सानीको धुलो बोक्न सुझाव दिने भनेर महिला अधिकारकर्मीले गृहमन्त्रीको भनाइको विरोध गरेका थिए । उतिबेलैदेखि व्यक्तिगत सुरक्षा सावधानीभन्दा सरकारमा निर्भर हुने विषय प्राथमिकतामा पर्न थालेको थियो ।
भदौ १२, २०७५ मा प्रकाशित